Kutanga unboxing yeiyo nyowani Apple AirPods | Ndinobva mac
Kutanga unboxing yeApple AirPods nyowani
Nhasi izuva rakakura apo Apple ichaburitsa iyo nyowani komputa system, iyo macOS Sierra, sisitimu ichauya yakabatana pamwe nezvakawanda zvitsva maficha uye iyo inofadza mamirioni evateveri veapuro brand. Nekudaro, isu tinoita zvishoma mabharanzi mukutanga izvo zvichaitika munguva pfupi kukuratidza imwe yekutanga unboxing yeAirPods nyowani iyo Apple yakaratidza mune yekupedzisira Keynote.
Kusvika parizvino, ini ndakanga ndisingakwanise kuona chero vhidhiyo mune chero svikiro yaive isiri yeKeynote test room munaGunyana 7, uye iri iro vhidhiyo ratinoisa muchinyorwa chino inotiratidza unboxing yeyuniti chaiyo yeaya mahedhifonis.
Zviripachena kuti iyo nyowani macOS Sierra system ichave mune yayo matumbo zvese zvinodikanwa kune nyowani Apple bluetooth mahedhifoni, iyo AirPods inogona kushanda zvakakwana. Sezvaunenge uchitoziva, haingori chero mahedhifoni uye zvinoita sekunge kana uchiasanganisa iwo kune mudziyo, ivo vane otomatiki kuwiriranisa pamwe neese maApple madivayiri anogona kuvashandisa, Tichaona kana ichiita kushandisa chimwe chinhu chine chekuita nekuwiriranisa kuburikidza neICloud kana kwete.
Muvhidhiyo iwe unogona kuona kuti bhokisi rinoratidzika sei patiri kuzokwanisa kuchinjisa pamwe nekuona kukura kwaro uye kuti mukomana anoita unboxing anozvifananidza nemudziyo wemazino floss. Chii chimwe, inoita kuenzanisa kweAirPods nedzimwe sarudzo dziripo pamusika.
Saka paunenge uchimirira OS X kugadzirisa, iyo inotarisirwa macOS Sierra, isu tinokukoka iwe kuti utarise izvi zvisina kubhokisi izvo zvinokuitira iwe mazino akareba. Ichokwadi ndechekuti isu hatigone kutsanangura kuti vamwe maYeTubers vanogona sei kuve neApple zvigadzirwa vasati vaenda kutengesa. Ko Apple pachayo ichave iri kumashure kweichi chinyararire ongororo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Kutanga unboxing yeApple AirPods nyowani
Ini ndinogona kukwidziridza Mac yangu kune macOS Sierra kubva kune yekare OS X?
Iyo yekudyidzana clipboard inosvika ne macOS Sierra